> Resource > bedelan karo > Smart Converter Pro Alternative: wejiyo iyo sida dhaqsaha badan Video Converter
Pro Converter Smart waa codsi Converter video ah oo loo isticmaalo si loogu badalo ka mid ah qaab videos in kale. Available in daaqadaha iyo version Mac, waxay gaadhaysaa hawlaha qaab beddelidda in xoogaa tallaabooyin ah. Si kastaba ha ahaatee waxaa jira khasaaro in la siiyo dadka isticmaala walaac ku saabsan codsigan. Inkasta oo waxa laga yaabaa inay fudud in la isticmaalo, waxaa ka maqan qaar ka mid ah functionalities aasaasiga ah la siiyo baahida loo qabo ka duwan.
Ma tahay in search for kale video Converter? Wondershare Video Converter Ultimate for Mac ( version Windows la heli karo) waa ka duwan oo lagu taliyey. Waxa aad weydiisan kartaa, "Maxaad Wondershare Video Converter?" Tani Smart Converter Pro kale waxay bixisaa users shaqeynta weyn hagaajinta waayo-aragnimo user ee. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah faa'iidooyinka ka.
Maxaa Kale ee lagu talinayo in Smart Converter fiican Pro
Sida loo rogo ama la Tani Alternative si Smart Converter Pro
1. Speed ​​ah Conversion: Muhiimadda xawaaraha diinta aan la fududaysan loola dhaqmo gaar ahaan marka ay timaado converters video. Smart Converter Pro kale, Wondershare video Converter badasha videos xawaare 30x ka dhaqso badan caadiga video converters. Tani waxa ay door bidayo doorasho ka dhigaa. Pro Converter Smart ayaa dhanka kale, ma aha sida ugu dhakhsaha badan ay kale oo lagu talinayaa, dhigaysa inaysan ku habboonayn files waaweyn.
2. Video Output Qaabka: Smart Converter Pro kale, Wondershare video Converter badasha videos in qaabab kale oo badan oo kala duwan sida MP4 3D, 3D wmv, 3D AVI, 3D MKV, 3D YouTube video), HD qaabab video (HD MKV, HD TS, HD TRP, HD AVI, MP4 HD, HD Mpg, HD wmv, MOV HD). Tani waxay ka sarraysa waxqabadka Smart Converter Pro.
3. dajinta ee Videos: Muuqaalka suurad wacan oo ah Converter video ah waxaa u ogolaanaya dadka isticmaala videos download internet ka, sidaas darteed waa in la dambe loo isticmaali karaa, isagoo aan mar kale in ay ku xidhmaan internet-ka. Wondershare Video Converter bixisaa shaqeynayaan inta Smart Converter Pro ma.
4. Video ayeey: Wondershare video Converter, ka duwan Pro Smart Converter bixisaa badan oo ka shaqeynayaan daray, mid ka mid ah taas oo ah video tafatirka. Tani waxay u ogolaaneysaa dadka isticmaala si ay u jar, isku shaandheyn, iyo isu geeyo videos ilo kala duwan galay mid ka mid clip. Pro Converter Smart ma laha shaqeynta this. Taas macnaheedu waxa weeye in la isticmaalo Smart Converter Pro, mid u baahan doonto software kale video tafatirka.
5.Burning Si aad DVD: Ka dib markii ay diinta ka file, dadka isticmaala qaar ka mid ah laga yaabaa in ay gubaan files si ay u DVD ah, ka duwan ayaa si Smart Converter Pro ayaa habkaani. Habka gubashada waa si fudud in la isticmaalo oo u baahan ma jirto waayo-aragnimo hore ama tababar.
6. Compactible la OS kala duwan: Wondershare Video Converter waxaa laga heli karaa version daaqadaha ma aha oo kaliya, sidoo kale waa la heli karaa version Mac, bixinta tayo la mid ah. Pro Converter Smart ayaa dhanka kale waxaa laga heli karaa oo keliya OS daaqadaha ay sabab u tahay, dadka isticmaala Mac aan u adeegsan kartaa codsigan.
In la soo koobay, haddii aad raadinayso duwan Smart Converter Pro, Wondershare video Converter waa ka duwan oo ay soo jeedisay in ay sabab u tahay mudnaanta kor ku xusan.
Diinta videos la Wondershare video Converter Ultimate u Mac si fudud dhamaystiray 3 talaabooyin fudud.
Tallaabo 1: Ku dar files si aanay u soo noqon, ama aad jiidi karaan iyaga oo hoos u.
Talaabada 2: Dooro qaab wax soo saarka ee video ah (MP4, AVI, FLV, iwm) sida aad doorashada.
Talaabada 3: Riix badhanka diinta si ay u bilaabi nidaamka. Files badaley waxaa laga heli karaa badhanka folder furan hoose ee codsiga.
Top 5 DVD Studio lagu bedelan karo Pro